Hababka Daaweynta ee Xanuunada Maskaxda
Author Topic: Hababka Daaweynta ee Xanuunada Maskaxda (Read 12285 times)
« on: March 09, 2009, 11:50:13 AM »
Kala dooraashada hababka daweyntu waxay ku xiran tahay xaaladda iyo heerka jirada ay gaarsiisan tahay.
hababka guud ee daaweynta waxaa ka mid ah isbitaaljiifin, daaweyn daawo ah iyo mid hadal ah.
Markii bukaanku uu sababayo waxyeelo nafsadiisa ama dadka kaleba mudada cudurku bilowga yahay ama marka uu soo laabto waa in qofka loo diraa isbitaalka si loo daaweeyo loolana socdo xaaladiisa.
Bukaanka waxaa loo diraa isbitaalka miyirka ama qeybta miyirka ee isbitaalada guud. Qaar bukaanka ka mid ah laga yaabee iney u fududahay iney aadaan Isbitaalka guud sababtoo ah wuu ka khalo yar yahay kuwa kale.
Aqbalista: Marka bukaanku la aqbalo waxuu maraa baaritaan uu baarayo dhaqtarka miyirka ama dad xirfad u leh caafimaadka miyirka si loo ogaado xaaladdiisa. Dhakhtarka miyirku waxuu kaloo ururiyaa wixii macluumaad ee ay hayaan dhaqtarka qoyska, dhakhaatiirta bukaan socodka ama shaqaalaha bulshada ee la xiriirta bukaanka xaaladihiisii hore si ay u helo xanuunka rasmiga, daawada u qorsheeyo, isla markaana u diyaariyo mustaqbalka sidii loo saari lahaa.
Waqtiga Joogista Isbitaalka: Waqtiga joogista isbitaalka, laga yaabee inuu helo daaweyn kala duwan iyadoo ay ku xiran tahay xaaladda miyirka qofka.
daaweyntaas waxaa ka mid ah daawo siin, daawo hadal ah, shaqo daaweyn ah, daaweyn kooxeed amase daaweyn qoyseed.
Ka-saaris Isbitaal: Qorshaha ka saaritaanku waxaa la sameeyaa markii bukaanku xaaladiisa miyireed la dejiyo calaamadaha xanuunkiisana gacanta lagu qabto. Caadiyan, isbitaalku waxuu u diyaariyaa bukaanka, xubnaha qoyska kulan, macno u sameneysa kuwa kale iyo shaqaalaha si ay uga manaaqashoodaan go’aana ugu gaaraan qorshaha isbitaal ka saarista. Badanaa, dhakhtarka bukaan socodku ayaa diyaariya daaweynta iyo waxyaabaha kale habka dhaqancelinta maalmaha loo diaarinayo.
La samee xiriir shaqaalaha isbitaalka
• Adigoo baranaya magaca iyo habkii aad ula xiriiri laheyd dhaqtarka miyirka, kalkaaliyayaasha iyo shaqaalaha bulshada oo ka mas’uul ah bukaanka.
• Toos iyo run ka sheegis waxyaabaha jira iyo isweydaarsi warbixinada kooxda daweynta (tusaale ahaan, dhibaatada ay daawadu keeni karto iyo raacis la’aanta bukaanka).
• Markasta ahow mid faraha kula jira habka daaweynta si aad u hubiso daawada ku haboon bukaanka.
• La soco kala duwanaanta dhaqanka iyo luqad ahaanba.
Daaweyntu waa muhiim si loo ilaaliyo xanuunka loogana hortago dib u soo noqoshada xanuun laga bagsooday. Bukaanka qaarkii waxuu u baahan yahay daaweyn waqti dheer. Daaweyntu waxaa laga yaabaa iney keento dhibaato kale. La xiriir dhaqtarka miyirka talo iyo sidii daawada aad ula qabsan laheyd. Ha yareyn daawada hana joojin adigoon kala tashan dhaqtarka.
Dawynta-Hadalka Ah (Psychotherapy)
Daweynta hadalka ah waa hab daaweyn ah oo dhista aaminka xiriirka u dhaxeeya dhaqtarka iyo bukaanaka.
Waxay ka caawintaa bukaanka inuu sheego dhibaatada, xal u helisteeda, isla markaana loo raadin lahaa qaboojin laab-lakaca waqtiga wada hadalka.
Intaa waxaa raaca, daaweeyuhu waxuu soo gudbin doonaa macluumaad bulshada, xirfadaha, waxbarashada iyo ururada bulshada iwm. Si looga diyaariyo bukaanka in uu dhexgalo bulshada.
Daaweynta Kooxeed (Group Therapy)
Hawalaha koox ahaan bukaankadu waxay bartaan iney ka doodaan isla markaana la qeybsadaan dhibaatooyinka iyo xalalka dhibaatada heysata. Daaweyn kooxeedku waxay isu keentaa awoodda kooxda taas oo ku hogaamisa kobcitaan iyo horumar.
Daaweyn Qoys (Family Therapy)
Daaweynta qoysku waxaa loo isticmaalaa quwadeynta iyo kheyraadka qoyska sidii uu u dhimi lahaa qoysku xanuunka laab-la-kaca isla markaana u hagaajin lahaa awooda qoyska si uu uga caawin lahaa xubinta jiran sidii loo dhaqan celin lahaa. Arintaasi waxay keentaa isku xirnaanta xubnaha qoyska. Waana in ay ka soo qeyb galaanxubnaha qoyska oo dhan waqtiga daaweeynta.
Hababka Dhaqameed Ee La Isku Daaweeyo (Traditinal Healing Methods)
Qoysasku iyo bukaanadu waxay isku dayi karaan daaweynta hab dhaqameedka, sida geedo daaweedka ama cirbado isku duris. Waxaa haboon in bukaanku kala tashado dhakhtarkiisa Haddii uu isticmaalayo daaweyn hab dhaqameed ah nooc kastaba ha ahaatee.
Weligaa ha isku dayin inaad ku bedasho daawo galbeedka daawo dhaqameed tashi la’aan. Sababtoo ah waxaa lagu sheegay baaritaan ka dib in waxqabadka daawo dhaqameedku uusan waxba ka tareyn cudurada miyirka.
Qoysaska qaarkood waxay raadiyaan daawo dhaqameedka si ay ugu kontorolaan dhibaatada daawooynka dhakhtarku u qoro. Waxaa lagagu waaninayaa in aad la socodsiiso dhakhtar dhaqameedka iyo dhakhtarka caadiga ahba labada dawo ee kale duwan ee aad istcmaaleyso.
Haddii aad ka qabto su'aal qoraalkaan halkaan ka weydii
Views: 16973 March 09, 2011, 10:28:48 PM
Views: 23623 July 05, 2015, 10:14:33 AM
Views: 19516 March 17, 2008, 06:18:55 PM
Views: 11062 May 29, 2009, 08:18:27 PM
Su'aal: Maxaa keena faaliga ku dhaca qaybta danbe ee maskaxda?
Views: 2748 November 21, 2011, 10:05:19 PM